Madaxweyne Deni oo sheegay in uu aqbalayo baaqii baarlamaanka Puntland ee ahaa in uusan ka qeybgalin shirka Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweyne Deni oo sheegay in uu aqbalayo baaqii baarlamaanka Puntland ee ahaa in uusan ka qeybgalin shirka Muqdisho
July 1, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweyne Deni oo ka hadlayay munaasibada sanadguurada 60-aad ee xornimada Soomaaliya oo ka dhacday Gaalkacyo, 1, July, 2020. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in uu aqbalayo baaqii kasoo baxay baarlamaanka Puntland ee dowladda u sheegayay in aysan ka qeybgalin shirka Muqdisho.
“Waxaan soo dhaweynayaa baaqii ka soo baaxay baarlamaanka Puntland 29-kii June 2020, talodooda ayaan ku shaqeynayaa anuu tixgelinaya haayadaha dastuuriga ah ee Puntland.” Sidaa ayuu yiri Madaxweynuhu, isagoo ka hadlayay sanadguurada 60-aad ee xornimada Soomaaliya oo xalay lagu qabtay madaxtooyada Puntland ee magaalada Gaalkacyo.
Isniintii, baarlamaanka Puntland ayaa dowladda ugu baaqay in aysan ka qeybgalin shirka Muqdisho oo u dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubna ka ah Federaalka.
Ajandaha shirka ayaa noqon doona sidii wadatashiyo ballaaran looga yeelan lahaa doorashooyinka dalka, arrimaha amniga, dagaalka ka dhanka ah kooxaha argixisada, dhammeystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha dalka.
July 8, 2020 Madaxweynaha Puntland oo la filayo in uu tago magaalada Dhuusamareeb
June 29, 2020 Baarlamaanka Puntland oo dowladda ugu baaqay in aysan ka qeybgalin shirka Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Labo katirsan ciidamada Uganda ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ayaa lagu dilay weerar gaadmo ah oo Talaadadii ka dhacay magaalada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose, sida uu maanta oo Arbaco ah sheegay [...]